Deg Deg: Dhuusamareeb oo laga saaray Shabaab meydad daadsan wadooyinka – SBC
Deg Deg: Dhuusamareeb oo laga saaray Shabaab meydad daadsan wadooyinka
Posted by editor on March 20, 2012 Comments
Iyadoo saaka waaberigii dagaal culus degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galguduud ku qabsadeen xarakada Al-Shabaab ayaa wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan in dib magaaladaasi looga saaray, ka dib markii xoogaga Ahlu Sunna Waljameeca ay duulaan rogaal celis ah ku qaadeen.
Xoogaga Ahlu Sunna ayaa waxay ka heleen gurmadyo xoogan deegaanada kale ee gobolka ee ay gacanta ku hayaan, iyadoo dirir culus ay ka dhacdey gudaha magaalada waxaana u suurtagashay inay dib u qabsadaan magaalada Dhuusomareeb.
SBC oo xiriiro kala duwan la sameysay dadka deegaankaasi ayaa xaqiijiyey in ay haatan gacan ku haynta Dhuusomareeb ugu hayaan xoogaga Ahlu Sunn Waljameeca iyadoo ay jiraan meydad fara badan oo daadsan wadooyinka magaalada kuwaasi oo isagu jira dad rayid ah oo ay haleeshay rasaastii la iswaydaarsanayey iyo waliba dhinacyada dagaalamayey.
Wixii warar ah ee ku soo kordha xaalada Dhuusamareeb kala soco wararka soo socda insha ALAAH.
Saed Axmed Maxamuud says:
waxaan u malaynayaa al-shabaab waa masiibo loo soo direy dalka somaliya iyo dadkiisa.lkn wan ka gudbeynaa inshaa alaah shadaadiinta diin dhagrayaasha ah.